WAXYAABAHA LOO MARO DIRXIGA EE MAYBOLT: DAROOGOOYINKA LOOGU TALAGALAY XAKAMAYNTA KUFSIGA IYO HABABKA CAANKA AH - BEER CAGAARAN
Qaadashada halganka leh duqsiga May iyo dirxiga
Bilowga xilliga gu'ga-xagaaga waa had iyo jeer farxad, laakiin waqti isku mid ah, dhacdo dhibaato leh xagaaga oo dhan.
Bilawga kulaylku waxay muujinaysaa muuqaalka cayayaanka, qaar ka mid ah kuwan faa'iido u leh dhirta beeraha, halka kuwa kale oo kaliya waxyeellada oo adoo wax cunaya oo dhanba.
Mid ka mid ah cayayaan sida cockchaferkaas oo ku daraya dhibaatooyin badan oo ku saabsan ninkii beerta ka shaqaynayay.
Cockchafer waa cayayaanka halkii baaxad weyn guduudan ama madow. Beetleh ayaa lagu beeray dhamaadka guga, dirxiga (googooyo) baaluq sanado badan oo dhulka hoostiisa ah. Qanjooyinkooda horeba way u xoog badan yihiin oo waxay awoodaan inay gowsadaan xitaa xididada da'da ah ee awoodda leh.
Iyadoo bilawga kuleylka uu ka yimaado ardayga cockchafer qaan-gaar ahTani waxay dhacdaa dhammaadka Agoosto ama horraanta Sebtembar. Xayawaan badan oo xayawaan leh ayaa dhulka ku jira, ka dibna mar kale waxay bilaabaan inay dib u bilaabaan caruurtooda.
Dhibaato noocee ah ayuu leeyahay cayayaanka?
Cuntada guud Xayawaanka laga yaabo inay yihiin caleemaha yar yar iyo caleemaha geedka. Xayawaanku wuxuu awood u leeyahay inuu ka baxo geedo qaawan oo geedo ah dhowr bilood.
Beetle laftiisa ma aha mid cabsi leh dhirta beeraha, ugu khatarsan dirxiga. Waxay ku dhow yihiin muuqaalka indhaha, sababtoo ah waxay yihiin dhulka hoostiisa.
Isla mar ahaantaana waxay burburiyaan nidaamka xididka geedka, oo gebi ahaanba dhinto.
Inta badan shey si ay u weeraraan duqsiyo Geedaha sida cherry, tufaax, boodh ama buckthorn badda u adeega. Xayawaanka ayaa sidoo kale degaya on currants iyo lilacs, bjørk iyo aspen. Dirxiga ma aha mid ikhtiyaari ah cuntada oo ay awoodaan in ay burburiyaan dhirta kasta oo kaliya ee dacha.
Waa maxay tallaabooyinka ka dhanka ah dirxiga ee Maybeetle?
Habab gaar ah
Tixgeli habka kiimikada ee wax looga qabanayo duqadda May iyo miraha.
Qalabkani waa cudur cayayaanka ah ee taabashada iyo dhaawacyada xiidmaha. Sidoo kale wuxuu ilaaliyaa dalagyada cayayaanka carrada. Waxyaabaha firfircoon ee ka kooban hal - diazinon qiyaasta 50 garaam oo kiilo ah. Si loo ilaaliyo dhirta ubaxa daroogada ayaa lagu buufiyaa dhulka dushiisa qiyaasta 30 garaamba 20 m2. Baradhada waxaa lagu baaraandegaa 10-15 garaam oo isku dhafan si ceelasha xilliga beerto.
Waxyaabaha bayoolojiga ku salaysan nematode. Xakameynaya dirxiga cayayaanka. Waxay ilaalisaa dheelitirka ciidda muddo laba sano ah.
Si aan khatar lahayn for aadanuhu iyo xayawaanka raba, ma waxyeeleeyaan xayawaanka ka socda deegaanka.
Daroogadu waxay dishaa naas-nuujin muddo 1-3 maalmood ah, oo u dhexeysa. Waxaa isticmaalay oo leh waraabinta subixii iyo fiidkii marka loo eego qiyaasta 1: 100 heerkulka gudaha 10-26 darajo oo ka sareysa eber, doorbidayna qoyaanka sare.
Daroogada si loola dagaallamo cayayaanka carrada. Waxay leedahay saameyn la mid ah Zemlin. Waxaa lagu duubay qaabka granules, taas oo ay ugu wacan tahay waqtiga ilaalinta.
Codsadey markaad beerto waxayna ka hortageysaa dhacdooyinka cayayaanka inta lagu jiro xiliga xagaaga. Ka dib markaad gashato ciidda waxay bilaabmeysaa inay dhaqdhaqaaqdo maalin gudaheeda. Microgranules ka hor inta laga beerto kaliya u baahan tahay inaad ku shubtid ciidda.
Ka leexinta dirxiga ee duqsigu May. Waxyaabaha firfircoon - thiamethoxam. Waa cayayaanka ka yimaada taabashada iyo dhaawacyada xiidmaha. Waxaa laga heli karaa qaabab kala duwan, si toos ah ayaa loogu dabaqi karaa ciidda ama waxay diyaarisaa xal.
Natiijada ka dib isticmaalka daroogadu waxay dhacdaa saacad gudaheed, iyo maalin kadib, gebi ahaanba dhammaan cayayaanka ayaa u dhintaan. Codsadey wakhti kasta oo sanadka ah iyo cimilada, qoyaanku sidoo kale ma saameynayo sifooyinka daroogada. Ku habboon cayayaanka kale iyo maaddooyinka quudinta.
Daroogada laga bilaabo dirxiga ee duqsigii May.
Haysashada deegaanka dabiiciga ah ee cayayaanka leh saameynta ilaalinta dheer. Iska diid roobka.
Qayb ka mid ah maaddooyinka firfircoon imidacloprid iyo bifenthrin. Waxaa lagu heli karaa foomka ka joojinta cayrinta. Si aad u ilaaliso baradho waa in lagu buufiyo dhirta ka hor inta laga beeri karo 10 ml. maadooyinka ilaa 5 litir oo biyo ah. Taasi waa inay ku filnaato 1 acres dhul ah.
Si loo ilaaliyo kaabajka iyo yaanyo 10 ml xalinta ayaa la sameeyaa. walxaha ku jira 3 litir. biyaha, ka hor inta aan la beeriin rhizomes lagu qooyay xalka 1 saac, dareeraha haray ayaa lagu qasi karaa 10 litir. biyaha oo loo isticmaalo waraabinta.
Si loo ilaaliyo geedo midho leh 10 ml xalinta ayaa la diyaarinayaa. walxaha ku jira 5 l. Biyaha (ku filan 0.2 sarre), xalku waa inuu si fiican u waraabiyaa xididka. Saplings geedo fudud ayaa sidoo kale lagu baaraandegi karaa asal ahaan xalka 10 ml. walxaha ku jira 3 litir. biyaha.
Daawo kale oo cudurka ah waa cayayaanka, kaas oo dila cayayaanka carrada by taabasho, xiidmaha iyo translaminar.
Waxyaabaha firfircoon - diazinon. Waxay haysaa ilaalin dheer oo dhaqameedyada ka soo horjeeda cayayaanka. 30 garaam oo walax ku filan oo lagu sameeyo 20 m2.
Hazard class - 3, oo aan ahayn phytotoxic, laakiin halis u ah kalluunka, looma ogolaan karo ku dhuftey diyaarinta qashinka.
Waxaa laga heli karaa qaabka granules. Si si siman u samee daroogada ee ciidda, waa inaad diyaarisaa weel dhuxul ah, dabool oo leh ¾ ciid, ku dar Bazudin halkaas oo isku daraan.
Ka hor intaan la dhicin baradhada waxaa lagu darayaa daloolka (15 g. 10 m2), si loo ilaaliyo kaabajka dusha sare ee ciidda waa la daweynayaa (10 g halkii 10 m2), dhaqamada ubaxa waxa la maareynayaa si la mid ah baradhada (15 gr. 10m2)
Cayayaanka ka mid ah xeryaha unugyada organophosphorus ee xakamaynta nidaamka iyo xiidmaha.
Fasax sii-deyn ah - granules-biyaha-uumi.
Qaybta kiimikada ee daroogada - qaybta ugu weyn - diazinon. Xog-ururinta waa 40 g / kg.
Qaabka ficilka. Daawada ka dib daawaynta ee xididdada ku fidaa unugyada dhirta oo dhan. Ilmaha, cunida, cunida iyo daroogada, ka dibna u dhinto.
Shuruudaha isticmaalka. Qalabka ka soo jeeda waxaa loo isticmaalaa oo kaliya habka xididka, ku rid geedka laftiisa laguma talinayo.
Fasalka Hazard - 3 fasal.
Recipe ee diyaarinta xalka: 8 garaam oo daroogada waa in lagu qasi jiray 1 litir oo biyo ah, ka dibna waxaa la jarjaray xididada.
Habka loo isticmaalo. Dhirta dhirta ayaa dhirta xididdada ku jirta. Ka dib 25 maalmood, xididdada ayaa dib-u-shaqeynaya daroogada halkii 50 garaam halkii mitir oo laba jibbaaran, ka dibna lagu beeray ciidda.
Hababka caanka ah ee loola tacaalo lamid ah
Wax ku ool ah ayaa noqon doona dagaalkii Khrushchev ee daaweynta dadweynaha. Habka hore ee qaadashada duqsigu waa iyaga oo ruxaya geedaha. Nidaamka waa in la sameeyaa saacadaha subaxda ama habeenkii. Ka soocay shakhsiyaadka dhirtu u ururisay dheddigga ma dhicin dib u dhigista, oo burburin.
Waxaad isticmaali kartaa si aad uga takhalusto jiritaanka shimbiraha. Kaliya waxaad ku dhejisaa warshad adoo adeegsanaya firiley ama cunto kale, waxaad sidoo kale xiri kartaa sanduuqyada qashinka ah ama bilow digaagga.
Ka qodo daloolka, ku rid berkedheeda, cidhifyada taas oo lagu dhajin doono wax dhejis ah. Beetles waa la xaday oo ma bixi karo.
Xayiraan warqad caddaan ah xadhig oo ku dheji. iftiin dhalaalaya. Dabin noocan oo kale ah ayaa soo jiidi doonta ragga ka mid ah duqadda May, waxay bilaabi doonaan in ay gurguuraan ka hooseeya go'yada iyo walaaq cawska. Waxa kaliya oo ay tahay inay ku qaadato weel gaar ah oo burburiya. On Dumarka Dabin tani ma shaqeyneyso.
Cuntooyinka caadiga ah ee ka soo horjeeda dirxiga ee Khrushchev
Sidee loo dilaa dirxiga Maybot? Habka ugu caansan, laakiin waqti-qaadashada ku qaadato in laga takhaluso dirxiga ah duqsiyo May waa ay ururinta farsamada. Guga, marka dhulku bilaabo inuu diirran ku filan, dirxiga u kaco sareeya kulaylka iyo qoyaan. Waxaad ka heli kartaa at qoto dheer 10-20 cm. Dhammaan dirxiga lama soo ururin karo, iyo qodaya dhulka - ma ahan habka faa'iido leh ee beeraha.
Si loola dagaallamo kooxaha Mucaaradka ah ee la xakameynayo daawooyinka dadweynaha, dhulka ku beeraan lupin. Ku dhowaad cawska lupin ma koraan, taas oo macnaheedu yahay dirxiga ma yeelan doonaan waxba wax cuni, sidaas u dhiman doonaan.
Si loo badbaadiyo baradho ka soo dirxiga ayaa si fiican u caawin doona xal daciif ah oo potassium ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ku buufiso caleemaha geedka.
Goobta agagaarka geedka hoostiisa dhir cad. Nitrogar, kaas oo lagu soo saari doono bakteeriyada laga helo xididdada dhirta, waxay ka dhigaysaa ciidda aan xannibnayn dirxiga, laakiin waxay bacrin u tahay koritaanka dhirta.
Waxaad badbaadin kartaa currants iyo strawberries by buufinta xalinta diirka basasha. 100 garaam oo kabo ah ayaa ku adkeysanaya 10 litir oo biyo ah muddo 5 maalmood ah. Tincture waxaa lagu qasi jiray qaybaha 1: 1 oo lagu buufin dhirta ay saameeyeen iyo dhulka hoose.
Ka hortagga muuqaalka lamaanaha ee goobta
Wax walbaa kama difaaci karo cayayaan badan ka hortagga wakhtiga.
Xaaladda qoyaanka guga, waxaad ku dari kartaa waxoogaa yar. cadar ama daroogo leh daroogo leh, waxay ka carari doontaa kuwa lamid ah.
Waxaad badbaadin kartaa strawberries xal dareeraha ammonia (tbsp nuskiiba 10 litir oo biyo ah).
May jirtey - cayayaanka khatarta ah ee geedka kasta.
Miyay tahay isla markiiba bilow dagaalka isaga oo kale, haddii kale dirxiga uu dhowr daqiiqadood wada baabbi'in doonaa oo dhan shuqullada.
Marka laga shaqeeyo dirxiga ubucda waxtar badan wadarta guud waxay caawin doontaa kiimikada la xiriirta qaababka dhaqameed.